Korona Fayras: Maxay Dadka Waaweyni Ugu Nugul Yihiin Cudurada? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — April 14, 2020
Dadka da’da ah ayaa u nugul caabuqyada, taas oo loo nisbeeyay jawaab celinta difaaca jirka oo aan awood u lahayn iska difaacidda caabuqyada. … intabadan dadka waaweyn waxaa lasoogudboonaado ama jirkooda waxa uu soo qaatay marxalada nololeed oo aad udheer, intaasina difaaca jirka waxa uu kujiray eegga hore ee difaaca cudurada, ugu danbeyn taas waxa ey jirka aadanaha kadhigtaa mid liita, mid jilicsan, mid aan awoodin in uu difaac galo.
Yaa Halis Ugu Jira Cudurka Coronavirus?
Da ‘kasta ha’ahaadeene, dadku waxa ey qaadi karaan cudurka Karoonaha (2019-nCoV). Dadka da’da ah, iyo dadka qaba xaaladaha caafimaadka gaarka ah (sida neefta, kaadi macaan, cudurka wadnaha) waxa ay u muuqdaan inay aad ugu nugul yihiin cudurkaan, waliba waxa ey dhaqaatiirtu caddeeyeen in uu aad usaameeyay fayruska karoonaha oo bukaanada qaarkoodna ey ugeeriyoodeen xanuunkaan.
Hey’adda caafimaadka adduunka “WHO” waxa ay latalin usoogudbisay guud ahaan dadka da ‘kasta oo ey yihiin, waxa eyna usoo jeedisay inay qaataan talaabooyinka ay isga ilaalinkaraan fayruska Karonaha, tusaale ahaan iyagoo raacaya nadaafadda gacmaha iyo iskarantiimeynta.
Dadka waaweyn waxa ey qabaan intabadan cudurro ugooni ah oo loo yaqaan “Cudurada daba dheeraada”-“Chronic Disease”:
Cudurrada dabadheeraadku waxa ay saameyn weyn ku yeelan karaan caafimaadka iyo tayada nolosha dadka da’da ah, Cudurka daba-dheeraadku: Waa cudur muddo dheer soconaya, oo ku dhaca dadka da’da ah waxaana kamid ah (Dhiig-karka, Kaadi Macaanka, Neefta iyo Cayilka). Cudurrada dabadheeraadku guud ahaan malahan wax tallaal ah xitaa majirto daawo looga bogsan karo, sidoo kale qofka waa’ey lanoolaadaan illaa geerida.
Maxaa Sababa Cudurada dabadheeraadka?
Hab nololeedka qofka oo hooseeya, Tusaale sigaar cabista, Jaadka, cunno xumada, jimicsi la’aanta jirka iyo welwelka badan ee qofka soofood saara, dhammaantood waxa ey saamayn xooggan ka geystaan horumarka iyo horusocodka cudurada dabadheeraada ee laga hortegi karo.
Sidee Ayay Ugu dadaali Karaan Naftooda Dadka Qaba Cudurada Dabadheeraada?
1.Cunno dheelitiran: intabadan dadka qaba cuduradaan waxaa lagula taliyaa in ey beddalaan hab nololeedkooda, gaar ahaan cunnada. Haddii uu qofku qabo cudurada Kaadi Macaanka ama Dhiig karka waa in uu beddalaa cunnada gaar ahaan cusbada ama macaanka. Cunno dheeli tiran waxa ey soo celisaa ama xoojisaa difaaca jirka.
2. Sameynta Jimicsiga:Jirka aadanaha waxa uu ubbaahanyahay jimicsi joogto ah, kuma xirna da’weyn iyo da’yar balse jirkeenna muhiim ayuu uyahay marwaliba. Dadka qaba cudurada dabadheeraada jimicsigu waxa uu kacaawinayaa in jirku ahaado mid dux badan guba.
3.Yareynta wel-welka: wel-welka waxa uu soo dadajiyaa cudurada aan daawada lahayn, qof walibana waxaa laga rabaa in uu ku dadaalo isdejinta, gaar ahaan waayeelka.
Tags: Maxay Dadka Waaweyni Ugu Nugul Yihiin Cudurada?
Next post Korona Fayras: 'Maalintii Aan Qorsheynayay Inaan Hadiyad Siiyo Ayaan Meydkeeda Aasay'
Previous post Korona Fayras: Saameynta Dhaqaalle uu Afrika ku Yeelan Karo Cudurkaan Korona